Vision: Himilada Nuru Afrika waa in laga qaado qofka Madowga / Afrikaanka ah mugdiga ka soo baxa maskaxdiisa, noloshiisa iyo wanaaggiisa.
Objectifs: Nuru Afrika waxay isu dejisay himilooyinkeeda:
Jebi silsiladaha carqaladeeya horumarka aadanaha Black / Afrika ;
Nin xor ah Black / Afrika fikradaha, fikradaha iyo fikradaha qalloocan ee, sida qolofka, xiraan;
Maalgashiga dadka Black / Afrika loogu talagalay horumarka buuxa ee Afrika
Ku dhiiri geli dadaallada qayb ka ah Cusboonaysiinta Afrika;
Abuurista habab aad kula xiriirto soo celinta taariikhdii hore ee Afrika;
Dib u qor taariikhda sharafta leh ee Afrika oo ku saleysan astaamaheeda dhabta ah;
Dib u hagidda hagidda Africans ;
Inaad uga tagto dhaxalka weyn ee jiilalka mustaqbalka ee Afrika;
Si loo hubiyo in Black Race ay saameyn ku yeelato Noocyada kale ee adduunka.
Dhiirrigelinta: Nuru Afrika waa meel bannaan oo wax ka qabata isla markaana wadaagsa mowduucyada kala diriraya dhammaan meelaha cirroodka ah ee loo wajahayo weynaanta Afrika.
Hal-abuurka: Nuru Afrika waa Afrika Lumière.
Posted By: Roger Manzekelewaa: Febraayo 21, 2020 9: 41 No Comments
In kasta oo dowladda Rwanda ay ku degdegeysay inay ku andacooto in Kizito Mihigo uu kufsaday qolkiisa xabsiga, qof walbaa wuxuu ogaa in dhibbanaha uu la kulmay jirdil aad u xun, ... Akhri wax dheeraad ah
Posted By: Roger Manzekelewaa: Febraayo 20, 2020 10: 06 No Comments
Intii uu ka shaqeynayay Beni ee Grand-Nord (North Kivu), Madaxweynaha Golaha Qaranka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Koongo, Ms. Jeanine Mabunda Lioko, ayaa farriin u dirtay ... Akhri wax dheeraad ah
Posted By: Roger Manzekelewaa: Febraayo 16, 2020 1: 29 No Comments
Cheick Anta Diop shaki la'aan waa mid ka mid ah noolaha aan dhiman karin ee Black Africa aysan weligeed qorin. Wuxuu la diriray ilig iyo ciddiyaha si uu u baabi'iyo kuwa doonaya inay been abuuriyaan taariikhda. Mid kasta oo ... Akhri wax dheeraad ah
Diyaarad Helicopter ah ayaa nolosha ka duubtay Kobe Brayant, warar murugo leh ayaa si lama filaan ah u dhacay oo aan la saadaalin karin: Kobe Brayant ayaa ka baxsan dunidan
Posted By: Roger Manzekelewaa: Janaayo 26, 2020 4: 13 No Comments
Kuwo badan ma aysan rumeysan markii ay maqleen warka geerida Kobe Brayant ee ay bixiso TMZ. Sida ku xusan macluumaadka ay la wadaageen dhowr warbaahin Mareykan ah, Kobe Brayant ayaa hadda uun iska caabiyay ... Akhri wax dheeraad ah
Posted By: Roger Manzekelewaa: Janaayo 26, 2020 2: 27 No Comments
Markii hore loo yaqaan "Stanley Falls", Wagenia Falls waxay caan ku yihiin dalxiiska, gaar ahaan kalluumaysiga cajiibka ah ee Wagenia. Waxay ku taal dhinaca sare ee qadka dhexe ee wabiga weyn ... Akhri wax dheeraad ah
Muxuu Lumumba u rabay inuu dib u qoro taariikhda Afrika ee Afrika? Riyada riwaayada ee Lumumba waxaa ka mid ahaa in maalin uun la arko taariikhda Afrika oo dib loo qori doono Afrika
Posted By: Roger Manzekelewaa: Janaayo 21, 2020 6: 02 No Comments
Sababtoo ah madaxbanaanidiisa iyo dabeecaddiisa aasaasiga ah, Patrice Emery Lumumba ma uusan aqoon sida loogu weyneeyo iskuulada, howl wadeenadii waqtiga ee Kongo Kongo. Haddii ay ka mid tahay ... Akhri wax dheeraad ah
Líbanda waa nooc ka mid ah halganka ay ku dhaqmaan Mongos ee DRC kaas oo u oggolaaday, asal ahaan, inuu cabbiro, iyadoo lagu raaxeysto, qiimaha iyo xirfadda dagaalyahannada
Halkan waxaa ah sida ay u iibinayaan khudaarta Congo-Kinshasa lagu dhaqo ... "Kacaanka casriga ah" ... (VIDEO)
Sawirro aan fiicnayn oo Professor John Henrik Clarke: Bulshooyinka Madow ayaa horumar gaadhay sannadihii 1920-kii, jiil ka dambeeya addoonsiga ... (VIDEO)